Hormuud News Wednesday, May 23rd, 2018 | 01:42
[Tuesday, September 12th, 17] :: Xisbiga KULMIYE Oo Daah-furay Barmaamij-siyaasadeedka Cusub ee Uu Doorashada ku Galayo
Hargeysa(RH)Xisbul-xaakimka haya talada dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee KULMIYE, ayaa maanta si rasmi ah u daah-furay barmaamij-siyaasadeedka cusub ee uu ku galayo doorashada Madaxtooyada ee u qorshaysan inay dalka ka qabsoonto 13-ka bisha November ee sanandkan 2017, si uu mar kale ugu guulaysto maamulka talada waddanka.
Daah-furka barmaamij-siyaasadeedkan cusub ee KULMIYE oo lagu soo bandhigay munaasibad ballaadhan oo ka dhacday madal bilan looga asteeyey hoolka aad u wayn oo ku yaal huteelka Maansoor ee magaalada Hargeysa oo ay isugu yimaadeen dhawr kun oo qofka, waxa ka qaybgalay Madaxweynaha Qaranka Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo, Madaxweyne-ku-xigeenka Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), Murrashaxa jagada Madaxweynaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, xubnaha hoggaanka sare iyo masuuliyiinta xisbiga, wasiirro iyo saraakiil kale oo ka tirsan xukuumadda iyo qaybaha bulshada oo lagu martiqaaday oo ay ka mid yihiin aqoonyahanno fara badan, dhallinyaro, haween, salaadiin, abwaanno, ururrada iskaashadatada wax-soo-saarka iyo kuwa kale ee arrimaha bulshada ka shaqeeya iyo dad kale oo fara badan oo ka mid ah kaadirka iyo taageerayaasha xisbiga KULMIYE.
Barmaamij-siyaasadeedkan cusub ee xisbiga KULMIYE soo bandhigay oo ka kooban buug 111 bayj ah oo isugu qaybo qodobo waawayn ah iyo faahfaahin mowduuc walba si gaar ah loogu sameeyey waxa uu ka kooban yahay toddoba tiir oo kala ah:
1. Arrimaha Bulshada; kaas oo ay hoos imanayaan qodobo ay ka mid yihiin, Waxbarashada, Caafimaadka, Biyaha, beelaha laga tirade badanyahay, haweenka, dhallinyarada, horumarinta dhaqaalaha dhallinyarada iyo warbaahinta, kuwaas oo mowduuc waliba uu wato faahfaahin ku saabsan qorshayaasha horumarineed iyo wax-ka-beddel ee xisbigu ku samaynayo.
2. Amniga iyo Nabadda; oo u sii kala baxa, Amniga gudaha, cuqaasha dhaqanka, amniga dibadda.
3. Dhaqaalaha; oo kala ah, la-dagaallanka saboolnimada, miisaaniyadda, siyaasadda cashuuraha iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo qaybo badan ka sii kooban, si qoto dheerna looga sii hadlay.
4. Garsoorka iyo Caddaaladda; oo ka kooban, Horumarinta hannaanka caddaaladda iyo garsoorka, Dastuurka, dib-u-habaynta shuruucda dalka, caddaaladda carruurta iyo xabsiyada.
5. Siyaasadda Arrimaha Dibadda; waxa hoos ku jira qodobo kala duwan sida:
Siyaasadda iyo istiraatijiyadda arrimaha dibadda, aqoonsiga, Midowga Afrika, IGAD, Midowga Yurub, Boqortooyada Ingiriiska, Maraykanka, Jaamacadda Carabta, xidhiidho cusub, wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya iyo Qurba-joogga, kuwaas oo mid kasta goonidiisa xisbigu u tilmaamay sida uu wax uga qabanayo, una horumarinayo.
6. Horumarinta Maamul-wanaagga; waxa hoos imanaya qodobadan hoose oo mid kasta sharraxaad badan wato.
Maamul-wanaagga, La-dagaallanka musuqmaasuqa, dib-u-haybanta shaqada iyo shaqaalaha dawladda, tiknoolojiyadda oo loo adeegsao isku xidhka hay’adaha dawladda iyo Maamul-daadejinta oo iyaguna qodob qodob loo sii kala faahfaahiyey.
7. Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada;
Xeerarka, siyaasadaha iyo nidaamka deegaanka, horumarinta deegaanka, maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah iyo daraasado.
Masuuliyiin, aqoonyahan iyo xubno marti sharaf ah oo ay ka mid yihiin labada suldaan ee Suldaan Maxamed Suldaan Sul. Cabdillaahi iyo Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan Sul. Cabdillaahi oo ka hadlay xafladda ayaa soo dhaweeyey barmaamij-siyaasadeedka xisbiga KULMIYE.
Guddoomiyaha KULMIYE, ahna murrashaxa jagada Madaxweynaha xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeediyey madasha, ayaa mid mid u dul-istaagay qaybaha uu ka kooban yahay barmaamij-siyaasadeedka xisbigu doonayo inuu ku hoggaamiyo dalka haddii uu mar kale ku guulaysto talada waddanka.
“Dhisikarimayno dhaqaale falsafad iyo caqli kasta oo la inoo keeno haddaanu dadku is-aaminayn oo aannu wax isku darsanayn oo ka Ceerigaabo jooga iyo ka Boorama joogaa aanay shuraakoobayn oo ka Badhan jooga iyo ka Saylac joogaa aanay wax wadayeelaynayn iyagoo Somaliland ah oo sharciga wada wadaagaya, horumarimayno innagoo u kala qoqoban gobol gobol iyo qolo qolo,” ayuu yidhi Md. Muuse Biixi mar uu ka hadlayey horumarinta dhaqaalaha.
Murrashax Muuse Biixi waxa uu mowqif adag ka istaagay la-dagaallanka musuqmaasuqa hantida oo qayb ka ah tiirka lixaad ee barmaamij-siyaasadeedka xisbiga oo ah horumarinta maamul-wanaagga, waxaannu yidhi, “Waxa loo baahan in cashuurta xukuumadda cusubi qaado la ogaado in aan la cunin oo inan yar oo karraani ahi boobin oo aan wasiir boobin oo aan musuqmaasuq dhicin, waa inay inay xukuumadda cusubi hubisaa in hantida ummaddu gacan aamin ah gasho, waayo haddii gacan aamin ah xooluhu galiwaayaan oo ninka cashuurta laga qaadayaa uu arkayo in rag ku isticmaalayo danahooda gaarka ah cashuurta bixinmaayo waana dulmi, taasina waa tiirka labaad ee ah in aynu si cad isaga wargelinayno oo ula dagaallano musuqmaasuqa. Waan ku celinayaa ee madaxdhaqameedka siyaasiyiinta u nugul qabaa’ilka ee marka lala hadlo reerkoodu soo cararo waa in aynu ka midownaa oo ballan ku wada galnaa in aynaan u nixin musuqmaasuqa qofkii hantida qaranka ku hungurooda.”
“Musuqu lacagta uun maaha, musuqu wuxuu ku jiraa maamulka in lagala dagaallamo, qofka ardayga jaamacadda ka baxay ah ee sita darada u sarraysa (A) haddii uu ka warwarayo in aannu aqoontiisaa ku meelmarayn oo imtixaanka uu galayo cidda qaadaysaa ay cid kale u eexanayso qaranku dhismaayo, waa in aynu ka dagaallanaa waxa la yidhaa garabsiinta oo qof waliba uu aqoontiisa meel ku gaadhaa,” ayuu yidhi.
Dhinaca kale, Guddoomiyuhu waxa uu ka hadlay tartanka doorashada ee dhexmaraya saddexda xisbi qaran, waxaannu xusay in xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiintiisuba ay wax badan dheeryihiin dhegooda xisbiyada mucaaradka iyo murrashaxiintooda u tartamaya.
“Madaxweyne-ku-xigeenka dalka ee hadda oo murrashax ku-xigeen u ah xisbiga KULMIYE Md. Cabdiraxmaan Saylici waxa uu dheeryahay murrashaxiinta madaxweyne-ku-xigeennada xisbiyada kale toddoba sanno oo uu ardayga Madaxweyne Siilaanyo ahaa oo uu maamulka ku soo jiray iyo intii ka horraysay ee uu xisbiga ahaa waayo-aragnimadeeduu buu leeyahay oo kuwa la tartamayaa aanay lahayn. Murrashaxiinta Madaxweynaha ee xisbiyada kale Cabdiraxmaan iyo Faysalba waa niman odayaal ah oo qiimo leh, waxase dheerahay iyagu waxay iga badiyaan Finland iyo Ruushka, aniguna waxaan dheerahay oo aan ka badiyaa tuulooyinka, Geella, Lo’da, Miyiga, Magaalada iyo dalka wixii ku nool,” ayuu yidhi Md. Muuse Biixi Cabdi.
Ugu dambayntii, Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo khudbad ballaadhan ka jeediyey halkaasi, ayaa ka hadlay xaaladaha dalka, horumarka iyo waxqabadkii ay xukuumaddiisu hirgelisay muddadii uu xilka hayey, tartanka doorashada Madaxtooyada iyo xisbigiisa KULMIYE ee uu aasaasay oo uu farta ugu fiiqay shacabku inay mar kale doortaan, “Xisbiga KULMIYE waa xisbigii aan aasaasay, waana xisbigii Madaxweynaha laygu doortay. Sidaa darteed, si uu barnaamijkii iyo waxqabadkii u dhammaystirmo waxaynu dhammaanteen u hawlgeli doonnaa sidii uu xisbigu mar labaad ugu guuleysan lahaa talada dalka,” ayuu yidhi Madaxweyne Siilaanyo.
Waxaannu isagoo hadalkiisa sii wata intaa ku daray oo yidhi, “Waxaan ummaddayda u bayaaminayaa inaan ahay oday qaran oo dalka iyo dadkaba ay masuuliyad culusi ka saaran tahay. Sidaa darteed, xisbiyada uu loollanku ka dhexeeyo ha ku kalsoonaadaan Xeerarka iyo Dastuurka Qarankeena iyo Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo u xil saaran maamulka Doorashooyinka. Waxaan aaminsanahay in aqoonta, waayo-aragnimada siyaasadeed, sumcadda iyo miisaanka uu hoggaamiye walba leeyahay ay door weyn ka ciyaari karaan kasbashada quluubta iyo maanka ummaddiisa iyo weliba kalsoonida iyo ixtiraamka uu ka heli karo beesha caalamka.
Haddaba, anigu qof ahaan aqoonta iyo waayo-aragnimada aan u leeyahay Guddoomiyaha, ahna murrashaxa xisbiga KULMIYE, Mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxaan si kalsooni leh u odhan karaa inuu yahay Murrashax waayo-arag ah oo leh tayo hoggaamiyenimo oo magac, maamuus iyo miisaanba ku leh Gobolka Geeska Afrika.”
posted on Tuesday, September 12th, 17